Nolosha Malung-Sälen | Somaliska
Kamuunka Malung-Sälen waa kamuun ku dhow xuduuda Norway kaasoo ka tirsan gobolka Dalarna. Kamuunka ayaa magaciisa hore waxa uu ahaa Malung ayado 2008 la go'aamiyay in loo bixiyo Malung-Sälen si loo suuq geeyo Sälen oo ah goob dalkiis. Soomaalida Malung-Sälen ma fara badna ayagoo u badan familo. Guryaha: Helitaanka guryaha ma dhib badna. Abdinasir Abdirashid Ali oo kamuunka u qaabilsan soo dhaweynta Soomaalida cusub ayaa noo sheegay in ay diyaar u yihiin in ay ku soo dhaweeyaan Soomaalida dooneysa in u soo wareegaan Malung-Sälen oo guryo ay siinayaan. Qiimaha guryaha ayaa ah 2 qol waa 4200 ilaa 4500, 1 qol waa 2700 ilaa 3200.. ayadoo intaas ay dadka u sii dheertahay lacagta Bostad Bidraga oo aan laga goosaneyn. Waxbarashada: Magaalada waxaa laga dhigaa SFi ayadoo dadku ay dhigtaan 3 saacadood inta kalena ay guryahooda joogi karaan qofkii firfircoon waxa uu raadsan karaa Baraktik ama shaqo. Dhinaca kale magaalada ayaa waxaa laga bixiyaa koorso dadka lagu barayo sidii ay ku qaadan lahaayeen Körkortka. Shaqada: Kamuunka Malung-Sälen waa mid ku fiican shaqada ayadoo qofkii firfircoon uu shaqo heli karo. Nolosha Guud: Magaalada waa mid iska yar oo caafimaad leh, dukaamada waxaa ku yaal ICA iyo Hemköp waxaa laga helaa hilip xalaal ah. Goobaha muhiimka ah waxay ku yaalaan Centerka magaalada oo bas looma baahna. Soomaalida ayaa adeega u doonta Borlänge oo 2 saac u jirta. Isku Socodka: Magaalada ma ahan mid wayn oo basas laysaga dhex raaco, waxaa u dhow Borlänge oo 2 saac u jirta. Waxaa magaalada ka baxa tareemo iyo basas. Stockholm waxaa loo socdaa 4 saac. Waxaa soo diyaariyay: Abdinasir Abdirashid Ali oo kamuunka u qaabilsan soo dhaweynta Soomaalida. Riix halkaan haddii aad jeceshahay in aad noo soo dirto warbixinta ku saabsan kamuunka aad ku nooshahay.
Kamuunka Malung-Sälen waa kamuun ku dhow xuduuda Norway kaasoo ka tirsan gobolka Dalarna. Kamuunka ayaa magaciisa hore waxa uu ahaa Malung ayado 2008 la go’aamiyay in loo bixiyo Malung-Sälen si loo suuq geeyo Sälen oo ah goob dalkiis.
Soomaalida Malung-Sälen ma fara badna ayagoo u badan familo.
Guryaha: Helitaanka guryaha ma dhib badna. Abdinasir Abdirashid Ali oo kamuunka u qaabilsan soo dhaweynta Soomaalida cusub ayaa noo sheegay in ay diyaar u yihiin in ay ku soo dhaweeyaan Soomaalida dooneysa in u soo wareegaan Malung-Sälen oo guryo ay siinayaan.
Qiimaha guryaha ayaa ah 2 qol waa 4200 ilaa 4500, 1 qol waa 2700 ilaa 3200.. ayadoo intaas ay dadka u sii dheertahay lacagta Bostad Bidraga oo aan laga goosaneyn.
Waxbarashada: Magaalada waxaa laga dhigaa SFi ayadoo dadku ay dhigtaan 3 saacadood inta kalena ay guryahooda joogi karaan qofkii firfircoon waxa uu raadsan karaa Baraktik ama shaqo. Dhinaca kale magaalada ayaa waxaa laga bixiyaa koorso dadka lagu barayo sidii ay ku qaadan lahaayeen Körkortka.
Shaqada: Kamuunka Malung-Sälen waa mid ku fiican shaqada ayadoo qofkii firfircoon uu shaqo heli karo.
Nolosha Guud: Magaalada waa mid iska yar oo caafimaad leh, dukaamada waxaa ku yaal ICA iyo Hemköp waxaa laga helaa hilip xalaal ah. Goobaha muhiimka ah waxay ku yaalaan Centerka magaalada oo bas looma baahna. Soomaalida ayaa adeega u doonta Borlänge oo 2 saac u jirta.
Isku Socodka: Magaalada ma ahan mid wayn oo basas laysaga dhex raaco, waxaa u dhow Borlänge oo 2 saac u jirta. Waxaa magaalada ka baxa tareemo iyo basas. Stockholm waxaa loo socdaa 4 saac.
Waxaa soo diyaariyay: Abdinasir Abdirashid Ali oo kamuunka u qaabilsan soo dhaweynta Soomaalida. Riix halkaan haddii aad jeceshahay in aad noo soo dirto warbixinta ku saabsan kamuunka aad ku nooshahay.
February 24, 2011 at 18:36
Jimcaale waa ku salaamey sxb anaa u baahan weyba igu baxdaa meshaan oo kale..lkn maka soo guuri karaa tuulada anigoo 1 sano keliya degen oo ii dhimaanin 2da sano ,, maadaama inta guriga leyga siiyey oo iskuul aan ka dhigto… jimcaale i deji sxb magaladaan sawirkeeda aanba ka helay lol kkk
Jimcaale Brother waxaan kaa iloowey soomaaliga muwaadinka ah kammun ka u shaqeeyo teel kiisa iyo emailka meel lagala xiriiro kuma aadan soo Qorin Aboowe… waala xiriiri lahaa nooh
asc walaal waan ku salaamay salaan kadib waxaan rabay meesha laga xiriiro kummuunka adigoo aad umahadsan sidag dag ah adoo raali ah waana kan emailkeeyga haddii aad war bixin isiin karto thnks sabaax15@hotmail.com
February 24, 2011 at 18:52
Khalid, waan kugu xiryaa Cabdinaasir asaga ayaa wixii faahfaahin ah ka heleysaa. Guuritaanka waxa uu ku xiranyahay meesha aad degentahay iyo halka aad u guureyso.
jimcaale Brother waxaan degenahey tuulo la dhaho Sorsele oo u dhow lycksele about 2hr … north ka thanks Bro..
Dhaman wa idin salamay Walalaha Sharafta leh.
Koley Aniga Somali jeceyl aya iga keneyso. In aan radiyo Somali.
Waxana ku faraxsanahay Somalida in an meel ku wada nolano ha xumadan ha samadan.
Somali wan ka dhashtay wana dhalay. Al xamdulilah.
Dhamantina so dhawada Qalbi furana ku soo dhawada.
walahay ani kolkba ad aan u jeclaanlahaa in ad ninka nala xaiiriso bro thnk h
Asc walaal yaal waad mahadsan tihiin dhamaantiin Jicmaale iyo Abdinaasir waxaana rabi lahaa Abdinasir taleefankiisa waadna ku mahadsan tihiin adeega aad u heysiin Soomaali weyn ilaaheyna ha idiin jaseeyo wadankana ilaahey nabad hanooga dhigo
hahahahah sxb walahay meesha wa ameel fiican lkin smalida waan aqanaa inta hore ayay wax xaysiiyaan oo dhahaan waan dagayna xagee kalaxariirna ama yaan laxariirnaa somaldia badan way necebyihin tuuloonka yar yar ama meel bus lookala racayn somaldia way istaqana ee nagadacyarta waa inta hore lkin wahay angu waxaan mahad aan lasoo koobi karin aan usoo jedinaya somaliska.com io jimcaale walahay ni dhalinyara ah oo firfircoon sxb shaqaa u hayso dadka waad ku mahadsanahay halkaa kasi wad
sxb yaal waan idin salaamay waxaan deganahay UMEÅ waxaan haya qoos soomaliyeed oo kakooban 12 qofood ayaa ila jooga oo aan wax kamuun ah heysan ee waxey ka balan san yihin migrationka in ey sheegtan kamuunka wlalkeen CABDISINAASIR OO waad cusub in aal asoo xiriirno ayaa raba si deg deg ah ee inteen ka heli karaa taleefanka walalken CABDINAASIR oo waxaan raba in codsi ey geestan kammuunka ISNIINTA hadii in teen deg deg uga heli wara wiilkan waa arin aaad iyo aad ugu baahanahay wxaan idin ka sugaa jawaab dhamaan wlalaha wixi gacan ugu siin karo arintaas
jimcaale waa mahadsan tahay balse tel ama imail cabdinaasir inaad nooga soo qortaan jeclayn si aan ula xiriirno cidii u baahan kamuunkaas adoo mahadsan nooga soo qor hadaad iimail ka hayso ama tel mahadsanid
Abdi walaal fasax uma heysto in aan emailkiisa ama telkiisa ku soo qoro halkaan balse email ayaan kugu soo dirayaa siaad ula xiriirto haddii aad u baahantahay cabdinaasir.
walaal jimcale Abidinaasir lambarkiisa ayaan rabaa aad ayan oogu baahnahay walaal si deg deg ah.